Akanjo mahazatra an'i Colombia | Vaovao momba ny dia
Akanjo mahazatra any Kolombia
Maria | | kolontsaina, General
Sary | Jiosy isan'andro
Ny akanjo mahazatra an'ny firenena dia santionany ara-kolontsaina sy ara-tantara amin'izany. Amin'ny tranga Kolombiana, ny folklore mifandraika amin'ny akanjo dia miresaka ny fahasamihafan'ny mponina ao aminy, ny toetrandro ary ny fanamaivanan'ny mponina ao aminy. Fifangaroana eo amin'ny kolotsaina vazimba teratany, ny kolontsaina Espaniola sy ny Afrikana izay nohafarana nandritra ny vanim-potoana fanjanahantany.
Amin'ny ankapobeny, ilay vehivavy dia manao palitao roa sosona. Zipo monocolor (mazàna mainty) izay ahitana taratra endrika samihafa sy maro loko, na dia ny mahazatra aza dia ny mametraka tadiny mavo sy manga ary mena telo amin'ny faran'ny zipo, hahitana fifanoherana kanto. Ny blouse mameno azy dia manana vozona vozona ary tsy misy tenda, miaraka amin'ny tanany lava. Amin'ny maha-kojakoja azy ireo dia kiraro mitovy loko amin'ny kofehy zipo sy satroka mena na khaki na scarf no ampiasaina.
Etsy ankilany, ny fitafiana ho an'ny lehilahy dia natao hifanaraka amin'ilay vehivavy. Matetika izy io dia vita amin'ny pataloha mainty sy lobaka lava lava vitan'ny scarf mena manodidina ny hatoka. Ny kiraro sy ny satroka dia mitovy amin'ilay nitafian'ilay vehivavy.
Na izany aza, Ny faritra mandrafitra ny Repoblikan'i Kolombia dia namolavola ny fitafiany mahazatra, manavaka ny akanjo misy eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy hahazoana akanjo izay mifameno tanteraka. ary tena manintona maso izany. Hihaona amin'izy ireo izahay, etsy ambany.
1 Faritra Andean
3 Ny akanjo Llanero
5 Faritra Orinoquía
6 Faritra Karaiba
7 Faritra Pasifika
Ny akanjo mahazatra ho an'ny vehivavy ao amin'ny faritra Andean any Kolombia dia misy blouse fotsy sy lovia vita amin'ny dantelina vita amin'ny kofehy sy kofehy ary voaravaka rindrambaiko pailletes. Izy io dia miaraka amina zip iray ao aoriana. Ny zipo dia vita amin'ny satin miaraka amin'ny loko mamirapiratra ary ny halavany dia ombilahy kely afovoany. Eo ambanin'io dia ny petticoat misy ruffle telo. Ny zipo dia voaravaka volom-boninkazo, na nolokoina na novonoina tamin'ny landy.
Amin'ny maha-kojakoja azy ireo, ny vehivavin'ity faritra ity dia manao satroka amin'ny lohany izay apetaka amin'ny volon'izy ireo voangona amin'ny randrana na tsipika na anaovana fehiloha amin'ny sisiny ankavanan'ny loha.
Raha ny palitao lahy, ny endriny dia tsotra kokoa Akanjo miaraka amina vozon'akanjo misokatra no anaovana azy, takelaka bokotra eo afovoan'ny tratra ary pataloa vita amin'ny gazety mainty na fotsy. Ho toy ny kojakoja, ny rambon'ny akoho na ny landy vita amin'ny landy ary ny fehikibo hoditra no ampiasaina.
Sary | TravelJet
Ny akanjo mahazatra an'i Antioquia dia miorim-paka ao amin'ireo mpanjifa paisas mpanjifa tamin'ny taonjato faha-XIX, ho an'ny lehilahy, ary ho an'ireo vehivavy mpanangona kafe ho an'ny vehivavy.
Raha amin'ny lehilahy, ny akanjo dia misy satroka mahazatra Antioqueño, fotsy misy kofehy mainty, ny poncho na ny ruana (miankina amin'ny hatsiaka na mafana ny toetr'andro) ary ny machete, espadrilles ary carriel. Amin'ny tranga vehivavy, ny palitao dia misy zipo mainty misy pirinty miloko ary blouse fotsy voaravaka amboradara sy satroka.
Ny akanjo Llanero
Izy io dia misy satroka lava volo, vita amin'ny ombivavy na tsapa, liquiliqui, pataloha ary espadrilles vita amin'ny kofehy ary tokana vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra. Amin'ny faritra sasany, ny akanjo llanero dia mbola manana fehikibo malalaka hitondra ilay revolver sy antsy ary koa faritra anatiny hitazomana vola.
Ao amin'ity faritr'i Colombia ity, ny akanjo vavy mahazatra dia misy zipo feno voninkazo misy halavan'ny lohalika ary blouse fotsy voaravaka rojo sy fehikibo vazimba teratany. Ireo lehilahy dia manao pataloha sy akanjo fotsy voaravaka rojo mitovy fomba aminy. Eo amin'ny toetr'andro tropikaly ny mponina ao amin'ity faritra ity dia miakanjo akanjo tsotra tsy misy akanjo maro nefa mampientanentana be.
Ny vehivavy Llanera dia tia manao zipo lava amin'ny vodin-tongotra, handravahana ny gorodona tsirairay amin'ny kofehy sy voninkazo. Ny blouse dia fotsy misy vozona sy tanany fohy. Tsy angonina ny volo fa toa malalaka. Mikasika ilay lehilahy, ny akanjo fanaony dia nisy pataloha fotsy na mainty nanakodia teo afovoan'ny tongotra hiampitana ny renirano sy akanjo fotsy na mena. Amin'ny maha-fitaovana azy, satroka malalaka volo, no eguama volo mainty tiany.
Raha jerena ny toetr'andro mafana sy mando any Karaiba, ny fitafiana izay anaovana matetika dia malefaka sy mangatsiatsiaka. Ohatra, amin'ny tranga lehilahy, ny rongony dia be mpampiasa amin'ny pataloha sy lobaka, izay vita amin'ny loko mamirapiratra. Ny «vueltiao» combrero dia ampiasaina ho fitaovana ilaina, malaza be any amin'ny departemanta Bolívar, Magdalena, Sucre na Córdoba.
Amin'ny tranga vehivavy dia afaka miresaka momba ny akanjo toy ny an'ny Cartagena isika izay misongadina ny fitaoman'ny kolontsaina afrikana amin'ny akanjo miloko sy amin'ny karazana lamba. Ohatra iray amin'izany ny palenquera, izay manarona lamba ny lohany izay itondrany koveta misy voankazo tropikaly, vatomamy mahazatra ary mofo misy katsaka.
Ao amin'ny morontsirak'i Pasifika Kolombiana dia ahitantsika ny fisian'ny fiarahamonina Afro-Kolombiana lehibe kokoa. Ny akanjo mahazatra an'ity faritra ity ho an'ny vehivavy dia misy zipo lava lava sy blouse vita amin'ny lamba malefaka amin'ny loko mamirapiratra izay manasongadina ny feon'ny tongotra. Mikasika ny lehilahy, ny fitafiany dia vita amin'ny lobaka landy fotsy misy tanany lava, pataloha denim fotsy ary espadrilles vita amin'ny cabuya, lamba matevina na matevina mitovy loko.
Ireo akanjo kolombiana mahazatra ireo dia mampiseho ny fahasamihafan'ny firenena misy kolotsaina miorim-paka ao amin'ny fakany izay mifangaro voajanahary ary miteraka karazana akanjo sy kojakoja tena manaitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Akanjo mahazatra any Kolombia
Jaime Suarez dia hoy izy:
Ry tompokolahy, mampiasa tsy misy alalana ny sary fanombohana ianao izay manana zon'ny mpamorona zon'ny mpamorona voasoratra ao amin'ny Direction National Copyright ao amin'ny Ministeran'ny Atitany eo ambanin'ny fisoratana anarana No. 5-318-262 ary hisorohana ny fangatahana eo alohan'ity orinasa ity. Mangataka aho ny hampiala azy.
Valiny tamin'i Jaime Suarez
Azavaiko ny sary izay ilazako fa navoaka tao amin'ny tranokalanao mitondra ny lohateny «Akanjo kolombiana mahazatra»
Fitsidihana ny loharanon'ny Urederra